Asan'ny Apostoly 21.15-26 : FAMPIHARANA IZAY NIANARANA | Fitandremana Ankadifotsy
Asan'ny Apostoly 21.15-26 : FAMPIHARANA IZAY NIANARANA
Asan'ny Apostoly 21.15-26
FAMPIHARANA IZAY NIANARANA
Mazotoa mandray vahiny (15-17). Rehefa mahafoy izay nifikirany taloha ny olona ka mandray an’i Jesoa Kristy dia lasa mahazo rahalahy sy trano zato heny (Marka 10.29-30). Hita eto amin’ny dian-dry Paoly avy tany Kaisaria ho any Jerosalema izany. Niainga tany Kaisaria izy ireo dia betsaka ny mpianatra niaraka taminy. Teny an-dalana dia afaka niantrano tsara tao amin’i Menasona, ary rehefa tonga tany Jerosalema dia noraisin’ny rahalahy tamin’ny fifaliana.
Ho an’ny rehetra ny famonjena (18-20a). Fankalazana an’Andriamanitra no setrin’ny fandrenesana vaovao avy tamin’i Paoly fa tsy ho an’ny Jiosy ihany ny famonjena fa betsaka ihany koa ireo Jentilisa tonga kristiana. Mba manao izay ampanaovin’Andriamanitra anao amin’ny fitoriana ny filazantsara amin’ny olona rehetra ve ianao?
Raiso ny malemy finoana (20b-26). Fampianaran’i Paoly tao amin’ny Romana 14 sy I Korintiana 8 sy 10 izany. Hitantsika eto ny fampiharany izany fampianarana izany. Diso tanteraka ny fiampangana nataon’ny Jiosy tamin’i Paoly; tsy mbola nampianatra ny Jiosy tsy hamora zaza mihitsy i Paoly, porofon’izany aza ny namorany an’i Timoty izay metisy jiosy (Asa 16.3). Ny hany toherin’i Paoly mafy dia ny fitadiavana famonjena amin’ny alalan’ny fanatanterahana ny lalàna (Romana 3.20-22; Galatiana 3.11). Ny porofo faharoa dia ny naneken’i Paoly hanao ny voady momba ny Nazirita (Nomery 6). Tsy vao izao izy no nanao izany fa efa nanao ihany koa izy tany amin’ny Asa 18.18. Tsy hahazoana famonjena izany na mahavery ny famonjena, fa mba tsy hanafintohina ireo Jiosy izay nahazo vaovao diso.
Fampieritreretana.”Hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala.” Matio 10.16.